FOTO KACHA MMA ONLINE NA RUSSIAN - N'IHI BEGINNERS - 2019
Foto kacha mma online na Russian
Enwere ọtụtụ ndị nchịkọta akụkọ n'ịntanetị, ndị a na-akpọkarị "photoshop online," ụfọdụ n'ime ha na-enyekwa ọrụ dị iche iche dị egwu iji dezie foto na ihe oyiyi. E nwekwara onye nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ sitere n'aka onye mmepụta Photoshop - Adobe Photoshop Express Editor. Na nyochaa a, ụdị ụdị foto online, dị ka ọtụtụ ndị na-akpọ ya, na-enye ohere kachasị mma. Nke mbụ, anyị ga-atụle ọrụ na Russian.
Echefula na Photoshop bụ Adobe. Ndị editọ ndị ọzọ na-ahụkebe nwere aha nke aka ha, nke anaghị eme ha ihe ọjọọ. Otú ọ dị, n'ihi ọtụtụ ndị ọrụ nkịtị, fotopịa bụ ihe nkịtị, a pụkwara ịghọta nke a dịka ihe ọ bụla nke na-enye gị ohere iji foto mara mma ma ọ bụ dezie ya.
Photopea - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpọmkwem foto Photoshop, dị na ntanetị, maka n'efu na Russian
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta foto iji nweere onwe gị, na Russian ma dị na ntanetị, nchịkọta foto foto photopea kacha dịrị nso.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na foto mbụ ahụ, interface dị na nseta ihuenyo n'elu ga-echetara gị nke ukwuu, nke a bụkwa kpọmkwem nchịkọta akụkọ ntanetị. N'otu oge ahụ, ọ bụghị naanị interface ahụ, kamakwa ọrụ nke Photopea na-emekarị (na, dị mkpa, ndị Adobe Photoshop na-emejuputa n'otu ụzọ ahụ).
Ọrụ (ibu ma zọpụta) na faịlụ PSD (nyochaa onwe gị na faịlụ nke foto Photoshop ikpeazụ).
Nkwado maka ọkwa, ịkwado ụdị, nghọta, nkpuchi.
Ndozi agba, gụnyere ogige, mixer channel, oghere ikpughe.
Na-arụ ọrụ na ọnụ ọgụgụ (Ụdị).
Na-arụ ọrụ na nhọrọ (gụnyere ụcha na-egosi, Dezie ihe ndị a na-eji eme ihe).
Na-echekwa na ọtụtụ ụdị formats, gụnyere SVG, WEBP na ndị ọzọ.
The Photopea nchịkọta foto ntanetị dị ugbu a nawww.photopea.com/ (ntụgharị dị na Russian nọ na vidiyo n'elu).
Editor Pixlr - onye a ma ama "foto online" na Intanet
Site na nchịkọta akụkọ a, o yikarịrị ka ị hụworị ebe dị iche iche. Ozi nchịkọta akụkọ nke onye nchịkọta akụkọ a bụ //pixlr.com/editor/ (Nanị onye ọ bụla nwere ike ibelata nchịkọta akụkọ a na saịtị ya, ya mere, ọ bụ ihe nkịtị). Ekwesịrị m ikwu na n'echiche m, isi nyochaa (Sumopaint) dị mma karị, ana m etinye nke a n'ọnọdụ mbụ ebe ọ bụ na ọ bụ ewu ewu ya.
Mgbe mbụ i bidoro, a ga-akpali gị ịmepụta ihe oyiyi efu (ọ na-akwadokwa pasting si clipboard dị ka foto ọhụrụ), ma ọ bụ mepee foto ọ bụla agwụla: site na kọmputa, site na netwọk, ma ọ bụ site na ụlọ akwụkwọ ihe oyiyi.
Ozugbo nke a gasị, ị ga-ahụ interface dị nnọọ ka nke Adobe Photoshop: ihe dị iche iche menu ihe na ngwá ọrụ, windo maka ịrụ ọrụ na n'ígwé, na ihe ndị ọzọ. Iji gbanwee interface gaa n'asụsụ Russian, họrọ ya na menu kachasị elu, na okwu asụsụ.
Onye nchịkọta akụkọ ntanetị n'ịntanetị Pixlr Editor bụ otu n'ime ndị kasịsị elu n'etiti ndị yiri ya, ọrụ niile ndị a nwere n'efu na enweghị ndebanye aha. N'ezie, a na-akwado atụmatụ niile a chọrọ, ebe ị nwere ike:
Ghaa osisi ma gbanwee foto, bechapụ ụfọdụ akụkụ ya, jiri ihe eji ederede na elliptical na ngwá ọrụ lasso.
Tinye ederede, wepu anya uhie, jiri gradients, ihe nzacha, blọọkwu na ndị ọzọ.
Gbanwee ọkụ na ọdịiche, saturation, jiri oghere mgbe ị na-arụ ọrụ na agba agba.
Jiri ọkọlọtọ maka ijikọta foto Photoshop ka ịhọrọ, họrọ ọtụtụ ihe, gbanwee omume na ndị ọzọ.
Onye nchịkọta akụkọ ahụ na-edebe ndekọ nke mgbanwe (History), site na nke ị nwere ike ịnyagharịa, nakwa na Photoshop, gaa na otu n'ime okwu ndị gara aga.
N'ikpeazụ, ọ na-esiri ike ịkọwapụta atụmatụ nile nke Pixlr Editor: nke a, ọ bụghị nchekwa Photoshop CC zuru ezu na kọmputa gị, mana ohere maka ngwa weebụ na-adọrọ mmasị. Ọ ga-eme ka ndị na-anụ ọkụrị na-arụ ọrụ na ngwaahịa mbụ sitere na Adobe - dịka e kwuwororịrị, ha na-eji otu aha menu, ụzọ mkpirisi keyboard, otu usoro nchịkwa maka nhazi na ihe ndị ọzọ, na nkọwa ndị ọzọ.
Na mgbakwunye na Pixlr Editor onwe ya, nke bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọkachamara nchịkọta akụkọ nke ndị ọkachamara, na Pixlr.com ị nwere ike ịchọta ihe abụọ ọzọ - Pixlr Express na Pixlr-o-matic - ha dị mfe karị, mana ha dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ:
Tinye mmetụta na foto
Mepụta foto nke foto
Tinye ederede, okpokolo agba na ihe ndị ọzọ na foto ahụ
N'ozuzu, ana m akwado ịnwale ụdị ngwaahịa niile, ebe ọ bụ na ị nwere mmasị na ike ntanetịime foto gị.
Onye ọzọ nchịkọta foto ntanetị dị ntanetị bụ Sumopaint. A maghị ya nke ọma, ma, n'echiche nke m, ọ na-ezighi ezi. Ị nwere ike ịmepụta nsụgharị ntanetịime nke nchịkọta akụkọ a site na ịpị http://www.sumopaint.com/paint/.
Mgbe ịmalite, mepụta ihe ọhụụ ọhụrụ ma ọ bụ mepee foto site na kọmputa. Iji gbanwee usoro ihe omume ahụ na Russian, jiri ọkọlọtọ na akuku aka ekpe.
Usoro ihe omume ahụ, nakwa dị na nke mbụ, bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu foto Photoshop maka Mac (ikekwe karịa karịa Pixlr Express). Ka anyị kwuo banyere ihe a ga-eme na Sumopaint.
Ịmepe ọtụtụ ihe oyiyi na windo dị iche iche n'ime "foto online". Nke ahụ bụ, ị nwere ike mepee foto abụọ, atọ na ndị ọzọ ka ha wee jikọta ihe ndị ha.
Nkwado maka ọkwa, nghọta ha, nhọrọ dị iche iche maka ikpuchi n'ígwé, ngwakọta mmetụta (Onyunyo, ọkụ na ndị ọzọ)
Nhọrọ nhọrọ di elu - lasso, mpaghara, wandi anwansi, nhọrọ nke pikselụ site na agba, nhọta nhọrọ.
Nhọrọ oke agba: ọkwa, nchapụta, ọdịiche, saturation, map ndị gradient na ndị ọzọ.
Ụdị njirimara dịka foto na-agagharị ma na-agbanwe agbanwe, na-agbakwụnye ederede, ntanetị dị iche iche (nkwụnye ins) iji gbakwunye mmetụta na mbiet ahụ.
Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ anyị, ọbụna ndị na-adịghị ejikọta na imewe na ibipụta, nwere ezi Adobe Photoshop na kọmputa, ha niile maara ma na-ekwukarị na ha anaghị eji ọtụtụ n'ime ike ya. Na Sumopaint, ma eleghị anya, a na-achịkọta ngwá ọrụ ndị a na-ejikarị emekarị, atụmatụ na ọrụ - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla nwere ike ịchọrọ ọ bụghị site na ọkachamara ọkachamara, ma onye nwere ike ijikwa ndị editọ graphic nwere ike ịchọta na ngwa weebụ a, kpam kpam n'efu na enweghị aha. Rịba ama: maka ụfọdụ nzacha na ọrụ, ị ka ga-edebanye aha.
N'uche m, Sumopaint bụ otu n'ime ụdị ngwaahịa kacha mma. Ezigbo elu "photoshop online", ebe ị nwere ike ịhụ ihe ọ bụla. Anaghị m ekwu maka "mmetụta dịka Instagram" - maka nke a, a na-eji ụzọ ndị ọzọ eme ihe, otu Pixlr Express na ha anaghị achọ ahụmahụ: naanị ịkwesịrị iji ndebiri. Ọ bụ ezie na ihe niile dị na Instagram nwere ike ịchọta na ndị editọ yiri nke ahụ, mgbe ị maara ihe ị na-eme.
Ntinye foto ntanetị Online
Onye nchịkọta akụkọ ntanetị nke Fọntị bụ onye na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ ọhụụ n'ihi na ọ dị mfe iji ya. A na-enwekwa ya n'efu n'efu na Russian.
Gụkwuo banyere ohere nke Fotor na isiokwu dị iche.
Ngwaọrụ Photoshop Online - onye nchịkọta akụkọ nke nwere ihe ọ bụla a ga-akpọ Photoshop
Adobe nwere software nhazi nke ya, Adobe Photoshop Express Editor. N'adịghị ka nke dị n'elu, ọ naghị akwado asụsụ Russian, mana ka m kpebiri ịkọwa ya n'isiokwu a. Ị nwere ike ịgụ nyocha zuru ezu nke nchịkọta akụkọ a n'isiokwu a.
Na nkenke, na Photoshop Express Editor naanị ọrụ nhazi nke dịnụ - ntụgharị na cropping, ị nwere ike wepụ ntụpọ, dị ka anya uhie, tinye ederede, okpokolo agba na ihe ndị ọzọ dị iche iche, mee ka ọ dị mfe ịgbazi agba ma rụọ ọrụ ụfọdụ dị mfe karị. Ya mere, ọ gaghị ekwe omume ịkpọ ya ọkachamara, ma maka ọtụtụ ebumnuche ọ nwere ike ịbụ ihe kwesịrị ekwesị.
Splashup - ọzọ analogue nke Photoshop, mfe
Dika m nwere ike ịghọta, Splashup bụ aha ọhụrụ maka onye nchịkọta akụkọ na-ahụ maka ihe nkiri weebụ Fauxto. Ị nwere ike ịme ya site na ịga na //edmypic.com/splashup/ na ịpị njikọ "Jump right in" link. Onye nchịkọta akụkọ a dị mfe karịa nke abụọ mbụ akọwapụtara, Otú ọ dị, ọbụna ebe a nwere ohere zuru oke, gụnyere m maka mgbanwe mgbanwe dị nro. Ozokwa, dị ka ọ dị na nsụgharị ndị gara aga, ihe nile dị kpamkpam.
Lee ụfọdụ atụmatụ na atụmatụ nke Splashup:
Ọmụmụ ihe Photoshop maara nke ọma.
Na-edezi n'otu oge ọtụtụ foto.
Nkwado maka ọkwa, ọdịdị dịgasị iche, nghọta.
Ihe nzacha, gradients, ntụgharị, nhọrọ ntanetị na ngwa nri.
Ntụziaka dị mfe nke agba - ikiri mmiri na nchapụta-iche.
Dị ka ị nwere ike ịhụ, na nchịkọta akụkọ a enweghi nkwụsị na ọkwa, yana ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ a chọtara na Sumopaint na Pixlr Editor, Otú ọ dị, n'ime ọtụtụ mmemme ntanetị ịntanetị ị nwere ike ịchọta mgbe ị na-achọ ntanetị, nke a dị elu, n'agbanyeghị na ọ dị mfe.
Dị ka m nwere ike ịkọwa, M jisiri ike ịgụnye nyochaa ndị editọ ederede dị oke ntanetị n'ịntanetị. M edeghị aha kpọmkwem maka ụlọ ọrụ dị mfe, ọrụ naanị nke bụ ịgbakwunye mmetụta na okpokolo agba, nke a bụ isiokwu dị iche. O nwekwara ike ịbụ ihe na-akpali mmasị: Otu esi eme ka mkpokọta foto dị n'ịntanetị.